जनतासँग निकट छु, जित सुनिश्चित छ
बैशाख २६ गते, २०७९ सोमवार
9th May, 2022 Mon ०८:२७:०६ मा प्रकाशित
माओवादी जनयुद्ध सुरु भएदेखि नै संगठनमा आवद्ध रेणुका चौलागाई चौेरी देउराली गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उम्मेदवार छिन्।
वि.सं. २०३५ सालमा काभ्रे जिल्लाको कात्तिके देउराली–६ मा जन्मिएकी चौलागाई सानैदेखि विद्रोही स्वभावकी थिइन्। परिवर्तनको चाहना राख्ने उहाँ अन्याय, अत्याचार, शोषण र दमनका विरुद्ध आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्थिन्।
जनयुद्धकालदेखि निरन्तर पार्टीमा सक्रिय चौलागाई हाल नेकपा माओवादी केन्द्रकै तर्फबाट चौरी देउराली गाउँपालिकाको अध्यक्षका उमेदवार छिन्। उनैसँग गरिएको कुराकानीको अंशः
तपाई एजेण्डाहरु केके छन् ?
काभ्रे जिल्लाको चौरी देउराली गाउँपालिका राजधानी काठमाडौबाट नजिक भएपनि यो विकट क्षेत्र नै मानिन्छ । डाँडापारि र कोशीपारि भनेपछि कर्णाली सरह नै मानिन्छ ।
त्यसैले यहाँको स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा जनताका आर्थिक आयआर्जनका कुराहरु पूरा गर्नेछौं । यस पालिकालाई समुन्नत र राम्रो बनाउने चाहना छ । यहाँका मानिसहरुलाई कुनै पनि आधारभुत तथा भौतिक कुराहरुको अभाव नहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।
तपाईंको जितका आधारहरु केके हुन् ?
जनयुद्ध सुरु भएदेखि अहिलेसम्म म यो पार्टीमा निरन्तर क्रियाशिल छु । मुलुकमा आएको यो परिवर्तन ल्याउनका निम्ति मेरो अहम् भूमिका छ । अझ भनौं मेरो जीवनको पूर्ण लगानी यहीँ छ । त्यस्तै यही परिवर्तनका निम्ति मेरो परिवारले गरेको त्याग÷तपस्या र बलिदान महत्वपूर्ण छ ।
यो परिवर्तनका निम्ति मैले मेरो ५ जना पारिवारिक सदस्य गुमाएकी छु । दाजु कमल प्रसाद चौलागाई, आमाजु बिन्दा चौलागाई र जेठाजु सहिद हुनुहुन्छ भने मेरो श्रीमान नविन गौतम र अर्की आमाजु कमला चौलागाई शर्मा अझै वेपत्ता हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म जनताको सेवक बनेर काम गरिरहेको छु । जनतासँग निकट छु । त्यसैले मेरो जीत निश्चित छ ।
तपाईंप्रति जनता कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहन्छ ?
यहाँका जनताले मलाई नेतृत्वमा आउनका लागि सुझाव दिइरहनुभएको छ । म महिला, हिजोका दिनमा पनि महिला मुक्तिका लागि थुप्रै लडाई लड्यौँ । महिलाले पनि बोल्न पाउनुपर्छ, आफ्नो अधिकार पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलनमा होमियौं ।
महिलाहरुलाई समग्रमा दोस्रो दर्जाको नागरिकको हैसियत प्रदान गरिरहँदा त्यस्ता महिलाहरुको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर हिजो पनि लडें, अहिले पनि महिलाहरुलाई माथि उठाउनुपर्छ, महिलाहरुलाई सत्तामा सहभागी गराइराखेको हाम्रै कारण हो । ति कुराहरु जनताले बुझ्नु भएको छ । त्यस्तै म सहिद परिवार पनि ।
म यही समाजमा छु, यही छु । यहाँको जनताको सुख, दुःख र अप्ठारोमा लागिपरेको छु । त्यसैले पनि यहाँले जनताले मलाई नै नेतृत्वमा आउनका लागि सुझाव दिइरहनुभएको छ । समग्रमा उहाँहरु मेरो कामप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।
यस पालिकामा भ्रष्टाचारको अवस्था के–कस्तो छ ?
यस पालिकामा भ्रष्टाचार देखिएको छैन । अन्यत्रको तुलनामा भ्रष्टाचारको मामिलामा खोट छैन । अन्य पालिका र जिल्लाबाट आउनेहरुले पनि सुन्दर छ चौरी देउराली, विकासमा पारदर्शी छ भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । यसलाई हामी भोलिका दिनमा पनि निरन्तरता दिनेछौं ।
जेष्ठ ४ गते, २०७९ - ०९:४८
धनुषाका पाँच पालिकामा कांग्रेस र एमाले दुई/दुई, जसपा एकमा विजयी
धनुषा । स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना जारी रहँदा नेपाली कांग्रेसले धनुषाको सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा अग्रता बनाएको छ । धनुषाको दुईवटा पालिका जितिसकेको ...
जेष्ठ ४ गते, २०७९ - ०९:३६
काठमाडौं । चाँगुनारायण नगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार जीवन खत्री विजयी भएका छन्। एमालेका बिणा बाँस्तोलालाई झिनो मतान्तरले पराजित...
जेष्ठ ४ गते, २०७९ - ०८:५५
मकवानपुर । उत्तरी मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा सत्तारुढ गठबन्धन विजयी भएको छ । आज बिहान सार्वजनिक मतपरिणामअनुसार थाहामा नेकपा (एमाले)का उम्मेदवारला...
जेष्ठ ४ गते, २०७९ - ०८:४९
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले स्थानीय तह निर्वाचनमा सेट...
जेष्ठ ४ गते, २०७९ - ०८:३१
काठमाडौं । राप्रपा नेपालले काठमाडौंमा ऐतिहासिक जित निकालेको छ। बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि पहिलो पटक काठमाडौंमा जित निकालेको हो। काठमाडौंको शंखरा...
जेष्ठ ४ गते, २०७९ - ०८:२२
काठमाडौं । चितवनको भरतपुर नगरपालिकामा २६ हजार ४ सय २६ मतगणना हुँदा माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहाल १४ सय ५५ मतान्तरले अघि रहेकी छिन्। नेकपा एमालेका वि...
जेष्ठ ४ गते, २०७९ - ०८:१५
काठमाडौं । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा ३१ हजार ६५६ गन्दा नौ हजार ९४१ मतसहित नेकपा एकीकृत समाजवादीकी मीना लामाले अग्रता लिएकी छिन्। राप्रपाक...
जेष्ठ ४ गते, २०७९ - ०८:०८
गणना ढिलो भएपछि मतगणनास्थल थप
जेष्ठ ४ गते, २०७९ - ०७:५७
काठमाडौं । सरकारले अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातमा पुनः भाडादर वृद्धि गरेको छ । यात्रुवाहक सवारीसाधनमा तीन दशमलव पाँच प्रतिशत भाडा बढाइएको हो ।...
जेष्ठ ४ गते, २०७९ - ०७:५१
डोटी । डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा कांग्रेसका तर्फबाट नगरप्रमुखका उम्मेदवार बाजीसिंह खड्का विजय र उपप्रमुखका उम्मेदवार रहेकी कलावती महर साउद निर्...
१९ स्थानीय तहको नतिजा : कांग्रेस ८, एमाले ७, माओवादी र समाजवादी २/२ पालिकामा जित (सूचीसहित)
स्थगन भएकामध्ये १९ मतदान केन्द्रमा निर्वाचनको नयाँ मिति तय
बालेन साहाले १७ हजार ५५८ मत ल्याउँदा स्थापितले ९ हजार ५६ मत प्राप्त गरे